Ukuthengisa ngaphakathi kunye neFunnel yokuThengisa eNtsha | Martech Zone
NgeCawa, ngoSeptemba 27, 2009 NgoMgqibelo, Oktobha 18, 2014 Douglas Karr
Ngelixa bendilungiselela ukuthetha eCincinnati kule veki, bendifuna ukubonelela ngombono omnandi obethetha ngendlela uphando kunye nemithombo yeendaba zentlalo ziyitshintshe ngayo inkqubo yokuthengisa. Nantsi into endiyibiza ngokuba yi Umsebenzi omtsha weNtengiso:
Kudala ukuba abathengisi balawule uphawu kunye nemiyalezo kwi-Intanethi, efuna abathengi kunye namashishini ukuba abukele imiboniso, ajonge ulwazi lwencwadana kwaye ekugqibeleni athethe nomthengisi. Ngelo xesha, babengenzanga sigqibo sokuthenga. Umthengisi unokuba nokusebenza ngokukuko ekushukumiseni ithemba kunye nokuvala intengiso.
Ngokufika kweendaba zosasazo kunye neinjini zokukhangela, abathengi kunye namashishini ayisiyiyo kwaphela Ku khangela… Ngoku reKu khangela. Oku kuthetha ukuba ithemba lixhobile kwinkampani yakho, iimveliso zakho, iinkonzo zakho, indlela abonwabe ngayo abathengi bakho kunye nawe, kwaye banokuba nesigqibo phambi kokuba Bade banxibelelane nabathengisi bakho.
Ukuqonda oku kubalulekile ukuba ufuna ukuvelisa ngokufanelekileyo isikhokelo sokungena ngaphakathi:
Enye yezona mpazamo zixhaphakileyo endizibonayo ziinkampani ezazisa iziza ezinolwazi oluninzi kakhulu ezivumela abathengi abanokubangela ukuba ungakufanelekeli. Yenza lula indawo yakho, yenza lula imiyalezo yakho kwaye uvumele abantu ukuba babe nomdla ngokwaneleyo wokufikelela kwifowuni, bajonge idemo okanye bakhuphele iphepha elimhlophe.
Ukuba unikezela ngokuntywila ngokunzulu kwiminikelo yakho ngeedemo, amaphepha amhlophe, okanye izifundo zetyala… njalo, njalo, uhlala ufuna undwendwe ukuba lubhalise ngaphambi kokuthatha elinye inyathelo. Abantu baqhele ukuthengisa ulwazi lwabo loqhakamshelwano ukufumana ulwazi abaludingayo. Kwaye abo bathabatha elo nyathelo longezelelekileyo kufanelekile ukuba banxibelelane nabo njengokhokelo olufanelekileyo.
Ukuqesha abathengisi abakrelekrele nabakhuthazayo. Usuku lwe-cheesy, umthengisi woxinzelelo oluphezulu kudala. Xa umthengisi ethatha ifowuni, bahlala bedibana nomntu kwelinye icala lomgca osele elazi ishishini lakhe. Ngamanye amaxesha bayiqonda ngcono kunomthengisi! Ndisasebenza neenkampani kwaye ndihlala kwiifowuni zabo zentengiso njengengcali yesifundo, ngamanye amaxesha wonke umahluko.
Ukunyusa itekhnoloji kubuninzi bayo. Ukuba uyayiqonda indlela abatyeleli abahamba ngayo ukuya kwindawo yakho, unokufaka umyalezo owenzelwe wena. Ukuba kukhangelwe, amagama aphambili ahlukeneyo kwimikhankaso eyahlukeneyo kufuneka akhokelele kwiifowuni ezahlukeneyo zokwenza isenzo kunye namaphepha okufika. Ukuba yi-Twitter, unokufuna indlela yokuncokola ngakumbi. Ukuba i-LinkedIn, indlela enobuchule ngakumbi. Nge-VOIP kunye nokuqhubela phambili ngomnxeba, kunokwenzeka ukukhala iifowuni ezahlukeneyo ezivela kwimithombo eyahlukeneyo.
Okona kuncinci, qalisa ukujonga kunye nokulandela umkhondo wazo zonke iindlela ezahlukeneyo ezithi zihambe kwishishini lakho. Nokuba kukudlulisa okanye ukuhlawula ngokucofa intengiso, kufuneka ube nendlela yokuzibandakanya ekwandiseni amazinga okuguqula.
tags: ifanele entsha yokuthengisaizigqibo zokuthengauphandoyokuthengisaifaneli yemidiya yoluntu
Lumkela i-Intanethi eyaziwayo
Sep 29, 2009 kwi-11: 53 AM
"Ubuncinci, qalisa ukujonga kunye nokulandelela zonke iindlela ezahlukeneyo ezithi zithathwe ngamathemba kwishishini lakho"
Zeziphi izixhobo ozisebenzisayo ukwenza oku? Uhlalutyo lukaGoogle? Radian6? IVisistat? Ndikhangela ezinye iindlela zokulandela.
Sep 29, 2009 ngo-8: 50 PM
Ukuqala ngohlalutyo linyathelo elikhulu ukubona ukuba yeyiphi imithombo ebonelela ngokugcwala kwindawo yakho. Nokuba kungcono i-id yenza uhlalutyo apho kukho iipokotho ezingaphezulu zezithuthi ezifanelekileyo-ezinokuthi zenziwe ngophando lophando (ngokulandela nje ukuba ngubani obekwe kumagama aphambili!).